Faayilii - Ministrii dhimmaalaa Yunaayitid Isteetis Mayik Pompeeyoo muumicha ministiraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad wajjin, Finfinnee, Guraandhala 18, 2020
Muummichi ministeeraa Itiyoopiyaa Abiy Ahimed injifannoo Meqelee keessatti argadhe jedhan ilaalchisuun loltoota isaanii ennaa faarsanitti ministriin dhimmi alaa Yunaayitid Isteetis Mayik Pompeeyoo wixata kaleessaa lolli Itiyoopiyaa keessa jiru martinuu akka dhaabatu yaadachiisan.
Pompeeyooon fuula twitter isaanii irratti," muummicha ministeeraa Itiyoopiya waliin kan ani dubbadhe yoo ta’u waraansi Tigraay keessatti jalqabe martinuu akka dhaabatu, mariin akka jalqabamuu fi gargaarsi namoomaa walaba ta’e akka dhaqqabu yaadachiiseera" jehuun barreessan.
Waraansi sun erga jalqbame qabee Tigraay keessa tajaajilli bilbilaa fi interneetii cite waan jiruu fi tarkaanfii humnaa fudhatamee fi namni meeqa akka du’e mirkaneessuun hin danda’amne.
Abiy Ahimed Sadaasa 4 mootummaa naannoo Tirgaay irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuu isaaf kunis haleellaa maadhee raayyaa ittisa biyyaa irratti loltoonni Tigraay fudhatnaiif deebii kennuuf ta’uu labsanii jiran. Hoogganoonni IWEHAT Rooyitersiif akka ibsanitti lolli amma iyyuu itti fufee jira.